शैलेश थापाको सेक्रेट : बाबु डीआईजी, छोरो आईजीपी प्रहरी संगठनप्रति गुमेको विश्वास फर्काउने चुनौति – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/शैलेश थापाको सेक्रेट : बाबु डीआईजी, छोरो आईजीपी प्रहरी संगठनप्रति गुमेको विश्वास फर्काउने चुनौति
शैलेश थापाको सेक्रेट : बाबु डीआईजी, छोरो आईजीपी प्रहरी संगठनप्रति गुमेको विश्वास फर्काउने चुनौति
२३ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा चार वर्षपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाट महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरिएको छ । मंगलबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवाको दौडमा रहेका शैलेश थापा क्षेत्रीलाई संगठनको २८ औं महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो ।
थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागमा एआईजीका रुपमा काम गरेका छन् । अब महानिरीक्षकका रुपमा उनले २२ महिना नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन् ।
झापामा रहँदा थापाले १५ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा हडप्न भएको अपहरणमा संलग्न एउट हाई–प्रोफाइल गिरोहको पटाक्षेप गरेका थिए । जसमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की राम कार्की) का स्वकीय सचिव राजु आचार्य (अग्नि) समेत संलग्न थिए ।
झापामा प्रहरी प्रमुख हुँदा थापा ।
विगतमा एकजना महानिरीक्षकमा नियुक्त भएलगत्तै प्रतिष्पर्धीसँग पानी बाराबारको स्थिति हुने गरेको थियो । तर, यसपालि थापा र प्रतिस्पर्धी हरिबहादुर पालले दुवैजना एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप नगरी अघि बढ्ने पूर्वघोषणा गरेका छन् ।
प्रहरीमा शक्ति केन्द्र निकट व्यक्तिको स्वार्थका लागि मनमौजी रुपमा नीतिगत निर्णय हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा थापाले कसरी संगठन हाक्लान् भन्ने निकट भविष्यले बताउनेछ
प्रहरीमा शक्ति केन्द्र निकट व्यक्तिको स्वार्थका लागि मनमौजी रुपमा नीतिगत निर्णय हुने गरेका छन् । यसका लागि सरकारले प्रहरी अधिकृतहरुसँग छलफल र परामर्श पनि गर्ने गरेको छैन ।
ज्ञवालीका पालामा डीआईजीको दरबन्दी कटौति गर्न खोज्दा गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग भनाभन नै पर्‍यो । थापाले अब संगठन कसरी हाक्लान् भन्ने चाहिँ भविश्यले नै बताउला ।
कङ्गोमा सैनिक सिपाहीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कम्तीमा १४ सर्बसाधारणको मृत्यु
मलेसिया गएका श्रीमान् दश वर्षसम्म नफर्केपछि परिवार चलाउन हरिमाया कुवेतमा
डा. अनुप बास्तोलालाई प्रश्न – निको भएका व्यक्तिबाट कोरोना सर्छ! कसरी सचेत रहने?